I-International Fair yama-20 ye Protection Environmental (IFAT) e Munich, waba grandly ibanjelwe e New International Expo Centre e Munich ukususela ngoMeyi 14 ukuya ku May 18, 2018 I-Munich Expo yasekwa ngowe-1966, uninzi ngokulungileyo professional yehlabathi ukhuselo lokusingqongileyo . Njengoko omnye wemiboniso ngamazwe ezinkulu ziqinisekiswe UFI, oko kukhokelela isiqhelo wakutshanje kuphando lwe shishino ukhuselo lokusingqongileyo ngamazwe kwaye isaziwa isibonisi jikelele.
IFAT iye yabanjwa ngempumelelo iiseshoni-19 kwaye mboniso inkulu yaye okubaluleke zorhwebo, ushishino ukhuselo lokusingqongileyo. Lo mboniso yeentsuku ezintlanu kuthatha indawo ye 260.000 square metres. It has 18 iiholo mboniso omkhulu-isikali kunye neendawo ezintathu mboniso yangaphandle. Kuye zibuthelwe ndawonye 3.304 abashishina abavela kumazwe 59 latsala iindwendwe ezingaphezu kwama 135.000 jikelele lobuchwepheshe kumazwe 168 ukuya kutyelela intsingiselo.Baya.
IFAT Expo bekusoloko kuthathwa njengethuba ebalulekileyo kushishino ukhuselo lokusingqongileyo yasekhaya ukungena kwimarike yamazwe ngamazwe. Iinkampani yokhuseleko abaninzi ezaziwayo-kakuhle basekhaya angaphandle yokusingqongileyo abe uthathe inxaxheba kule expo sibekwe technologies ukhuselo lokusingqongileyo umhlaba wabo phambili. Niutech Environment Technology Corporation (emva koku obizwa ngokuba "Nituech") ezisa phambili izixhobo zobuchwepheshe pyrolysis ngamazwe IFAT. Inethemba ukwandisa ishishini layo ngamazwe ngale qonga omkhulu urhwebo, kodwa phambi ihlabathi ukubona ngokuvela kushishino ukhuselo lokusingqongileyo China kungekuphela, ngaphezu koko, ukubamba eli thuba lokuqhuba iingxoxo kunye nasekutshintshisweni kunye bayiminquba elite kulo lonke ihlabathi, nokubonisa ihlabathi isimbo kunye namandla kweenkampani kulawulo lokusingqongileyo eTshayina ngendlela yonke-ngeenxa zonke,-level ezininzi, yaye ebanzi kuluntu.
China kwaye ziqinisekiswe EU CE kunye Germany TUV. Ithekhnoloji nezixhobo linokusetyenziswa uluhlu olubanzi izicelo kwaye ingasetyenziswa okutsha Iipholima eziphakamileyo ezinto ezifana amavili inkunkuma, iiplastiki zenkunkuma, ioli elitshisiweyo, iintlobo ezahlukeneyo ze-oyile inkunkuma, i-oyile eyintsalela, inkunkuma yamachiza, inkunkuma eqinileyo , kunye zokubasa. Le izixhobo ziye zithunyelwe eJamani, Brazil, Hungary, Estonia, India, Thailand, Malaysia, Iraq, Taiwan kunye namanye amazwe kunye nemimandla, baye baphumelela indumiso ngamxhelo kubathengi.
Ngenxa kokuphuma iimfuno kulawulo lokusingqongileyo eTshayina, imfuno ukutshintshiselana ubugcisa lwendalo phakathi ekhaya naphesheya liyaqhubeka nokwanda. Njengoko undoqo Europe, Germany yenye amaziko amakhulu kurhwebo lwehlabathi ingakumbi iqonga ikhethwayo kwiinkampani Chinese ukubonisa iimveliso kunye nobuchwepheshe ngqo kulo ihlabathi. Njengenkampani Chinese, Niutech imele kuphela amandla brand kunye nobugcisa inqanaba le nkampani, kodwa ibonakalisa amandla ushishino ukhuselo lokusingqongileyo eTshayina. Kwakhona Niutech uyisingele phantsi sokunikezela ukuya kwimarike yamazwe ngamazwe kunye nokwakha abenzi izixhobo ukhuselo lokusingqongileyo lwehlabathi top omnye kunye nonyango esingqongileyo ababoneleli ngenkonzo technology.
ixesha Post: Jul-11-2018